ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသို့မဟုတ် Unframed E1-FE Converter - တရုတ်ဟန်ကျိုး FCTEL နည်းပညာ
ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသို့မဟုတ် Unframed E1-FE Converter
This device is the extension device of Ethernet, using network (PDH/SDH/Microwave) that provide E1 channel to achieve local and remote Ethernet interconnecting with serial interfaces atalower cost. The device has inter-set loop test function to facilitate the project launching and daily maintenance.
ဤသည်ကို interface converter ကိုတဦးတည်း unframed 2048K E1 ပေးပါသည်သို့မဟုတ်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြ n * 64Kbps E1 interface ကိုနှင့် E1 channel မှာ 10 / 100Base-T က Ethernet ဟာဒေတာထုတ်လွှင့်အောင်မြင်ရန်တဦးတည်း Ethernet interface ကို။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, Self-သင်ယူမှုသည် Ethernet တံတားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိရိယာကိုတစ်ဦးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာအမှတ်စဉ် interfaces နှင့်အတူ interconnecting ပြည်တွင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်သီ Ethernet အောင်မြင်ရန် E1 ရုပ်သံလိုင်းများကိုကွန်ရက် (PDH / SDH / မိုက်ခရိုဝေ့) ကိုသုံးပြီး, Ethernet ရဲ့ extension ကိုကိရိယာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ device ကိုစီမံကိန်းစတင်များနှင့်နေ့စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အချင်းချင်း-set ကိုကွင်းဆက်စမ်းသပ် function ကိုရှိပါတယ်။
◆ Support unframed mode (2048K) set and can manage the remote device condition ,
◆ အဆိုပါ converter ကိုပြန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ interface ကိုကွင်းဆက်၏လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကိုရှောင်ရှား, စစျဆေးကျော E1 interface ကိုကွင်းဆက်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည် ဖြစ်. ,
◆ device ကို power-ပယ်သို့မဟုတ် E1 လိုင်းကျိုးသည်သို့မဟုတ် signal ကိုဆုံးရှုံးရသောအခါညွှန်ပြချက်ရှိသည် ဖြစ်. ,
◆ E1 လိုင်းကျိုးနေစဉ် Ethernet interface ကိုရန် LINK signal ကိုပေးပို့ဖို့မသော E1 လိုင်းသတ်မှတ်နိုင်သည်;
◆ The Ethernet interface supports jumbo frames (2036 Bytes);
◆ ဒေသခံဒေတာဘောင် filtering ကိုနှင့်အတူအင်တာမီလန်-set ပြောင်းလဲနေသော Ethernet MAC address ကို (4,096)
◆ Ethrnet interface supports10M/100M, half/full duplex auto- Negotiation and AUTO-MDIX (crossed line and straightly connected line self-adaptable );
◆ Ethernet ဟာမော်နီတာ Self-မှပြန်လည်စတင် function ကိုရှိသည်, ယင်းပစ္စည်းကိရိယာများသေလွန်သောသူတို့သည်မ
◆ Can achieve the remote device setting any5mode of Ethernet and can closed the AUTO-MDIX function;
◆2နာရီအမျိုးအစားများကိုပေး: E1 မာစတာနာရီနှင့် E1 လိုင်းနာရီ;
◆ ဒေသခံကိရိယာဝေးလံခေါင်သီသည့်ကိရိယာနှုန်းကိုအတင်းအဓမ္မနိုင်ပါတယ် (device ကို unframed mode ကိုအခါကြောင့်မမှန်ကန်) ကအတိုင်းလိုက်နာ;
◆ E1 interface ကို Loop သို့ပြန်သွားရန် (ANA) Ethernet interface ကို Loop သို့ပြန်သွားရန် (ကိုတူး), ဝေးလံခေါင်ဖျားဆင့်, Ethernet interface ကို Loop သို့ပြန်သွားရန် (REM): သုံး Loop သို့ပြန်သွားရန် Mode ကိုဖူး
◆ ပံ့ပိုးမှု SNMP ကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲမှု,
◆ Can realize monitor of remote equipment temperature and voltage from local equipment;
◆ Ethernet E1 တံတား (က) --- E1 Optical Fiber Modem (ခ) --- Ethernet Optical Fiber Modem (ကို C): ဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းရန်နိုင်သလား
◆ ဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းရန်နိုင်သည် Ethernet E1 တံတား (က) --- Optical Ethernet Modem (ခ) --- Ethernet Optical Fiber transceiver (C) (က) မှာ (ခ) နှင့် (ဂ) စီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်
ပုံစံ မော်ဒယ်အရေအတွက်: FCC သည်-E1F1
functional ဖျေါပွခကျြ 1channel E1 - FE converter, E1 loopback ထောက်လှမ်း function ကိုအတူ
ဆိပ်ကမ်းဖျေါပွခကျြ တဦးတည်း E1 interface ကို; 1 * FE Interface
အတိုင်းအတာ Product Size: Mini type 216X140X31mm (WXDXH),1.3KG/piece 19inch 1U type 483X138X44mm (WXDXH),2.0KG/piece
applications ကို 1
applications ကို 2
applications ကို 3
ယခင်: ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသို့မဟုတ် Unframed E1 Optical Ethernet Converter
နောက်တစ်ခု: ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသို့မဟုတ် Unframed E1-4FE interface ကို Converter
8 E1 Pdh multiplexing မီဒီယာ Converter
E1 ရန် Fiber Converter
V.24 Converter ရန် E1
E1 ရန် V.35 Converter
Fe ရန် E1 Converter